एक जिल्लामा डेढ महिनामा ११ ओटा सम्बन्ध विच्छेद | जनदिशा
एक जिल्लामा डेढ महिनामा ११ ओटा सम्बन्ध विच्छेद
Sahas September 4, 2018	No Comments
दोलखा । अहिलेको समयमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र सामान्य घरझगडाका कारण सम्बन्ध विच्छेद हुन थालेका छन् । त्यस्तै दोलखा जिल्लामा ११ जोडीले सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् ।
सम्बन्ध विच्छेदका लागि गएको साउनदेखि अहिलेसम्मा जिल्ला अदालतमा १६ वटा निवेदन परेका छन् । पाँच वटा निवेदन फछ्र्यौट हुन बाँकी नै रहेका छन् । सम्बन्ध विच्छेद गर्नेमा २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन् ।
गएको वर्ष जिल्ला अदालत दोलखामा ६८ सम्बन्ध विच्छेदका उजुरी दर्ता भएकामा ५९ जनाको मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । बाँकी नौ वटा निवेदन यो वर्षका लागि सारिएको थियो ।
गल्ती स्वीकार्न नसक्दा श्रीमान् श्रीमतीबीच नै असमझदारी बढेको र सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत आइपुग्ने गरेको जिल्ला अदालत दोलखाका खरिदार कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो ।
Previous Previous post: ड्याडी ! सवारी भनेको के हो ?
Next Next post: त्रिशुलीमा कन्टेनर खस्यो